Rashmi Rocket (2021) ##unicode မနေ့က 15 October မှထွက်လာတဲ့ ဒီကားအသစ်လေးကတော့ review ကောင်းတွေနဲ့ နာမည်ရ Trending နေပါတယ် Sport Drama ကားပါ IMDb မှာ 5.6 နဲ့ရထားပြီး Haseen Dillruba,Badla, Pink တို့နဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ မင်းသမီး Taapsee Pannu က ခေါင်းဆောင်နေရာက သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ငယ်ငယ်ကတည်းက ထူးခြားတဲ့ပါရမီနဲ့မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူမ.... ရွာသေးလေးကနေ အိုလံပစ်ထိပြိုင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်... သူမတူတဲ့ အမြန်နှုန်းနဲ့ပြေးနိုင်လို့ သူမကိုခေါ်ကြတာ ''ရော့ခ်ကတ်'' တဲ့ Rashmi က ငယ်ငယ်တည်းက အပြေးသန်ပြီး ကျန်းမာတဲ့ body ရှိပါတယ် မိဘတွေနဲ့ တစ်ရွာလုံးက သူ့ကိုအားပေးပြီး ပြိုင်စေချင်ကြတဲ့အတွက် Rashmi ကလဲ ပြိုင်ပွဲတခုကို အပျော်ဝင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ် အဲ့ကနေ သူအရည်အချင်းရှိမှန်းသိပြီး ပြေးတာကိုလဲသဘောကျရာကနေ ဒါကိုအတည်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ရွာငယ်လေးက သာမန်မိန်းခလေးပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက် အခက်အခဲတွေအဆင့်ဆင့်တွေ့ရပါတယ် အနိုင်ကျင့်တာတွေ လိမ်တာတွေကြားကနေ ထိပ်ဆုံးကိုရောက်ပြီး နိုင်ငံကချစ်တဲ့ နိုင်ငံကိုယ်စားပြု အားကစားသမားဖြစ်လာပါတယ် သူကြိုစားခဲ့တာတွေ ရလာတဲ့အခါကျမှ gender test ...
Seetimaarr (2021) (App member only) ##unicode အက်ရှင်ဇာတ်လမ်းကြိုက်သူတွေအကြိုက်တွေ့စေမယ့် အသစ်ထွက်အိန္ဒိယအက်ရှင်ကားလေးတစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီကားလေးဟာဆိုရင် ကတ်ဘတီအားကစားကို အသားပေးရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး ဝင်ငွေ ၂၅ crore Box office မှာလည်း ရှစ်ရက်အတွင်း၁၅.၁၀ crore ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ ကာသီဟာသူ့အဖေတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ရွာကျောင်းက မိန်းကလေးတွေကို ကတ်ဘတီအားကစားနည်းပြလုပ်ပေးနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ကာသီဟာအန်ဒရာပရာဒက်ရှ်မြို့ကိုကိုယ်စားပြုပြီး နိုင်ငံအဆင့်ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အထိစဉ်စားပြီး မိန်းကလေးအဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ကြိုးစားရင်းချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့အတွက် ဒေလီကိုသွားရဖို့ဖြစ်လာပါတယ် ဒါပေမယ့်ကာသီတို့အဖွဲ့မှာ မထင်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ် ဒေလီမှာလူသတ်မှု ပြန်ပေးဆွဲမှု မုဒိမ်းမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင် မာခန်ဆင်းဂ်ဟာကတ်ဘတီအသင်းက မိန်းကလေးတွေကိုပြန်ပေးဆွဲသွားပါတယ် ကာသီတစ်ယောက်ကတ်ဘတီအဖွဲ့မိန်းကလေးတွေကိုကယ်တင်နိုင်ပြီး ချန်ပီယံရှစ်ဖလားကိုအရယူနိုင်ပါ့မလား ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi အက္ရွင္ဇာတ္လမ္းႀကိဳက္သူေတြအႀကိဳက္ေတြ႕ေစမယ့္ အသစ္ထြက္အိႏၵိယအက္ရွင္ကားေလးတစ္ကားကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဒီကားေလးဟာဆိုရင္ ကတ္ဘတီအားကစားကို အသားေပး႐ိုက္ကူးထားတာျဖစ္ၿပီး ဝင္ေငြ ၂၅ crore Box office မွာလည္း ရွစ္ရက္အတြင္း၁၅.၁၀ crore ရရွိထားတဲ့ ဇာတ္ကားေကာင္းတစ္ကားျဖစ္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာေလးကေတာ့ ကာသီဟာသူ႔အေဖတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့႐ြာေက်ာင္းက မိန္းကေလးေတြကို ကတ္ဘတီအားကစားနည္းျပလုပ္ေပးေနတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္ ကာသီဟာအန္ဒရာပရာဒက္ရွ္ၿမိဳ႕ကိုကိုယ္စားျပဳၿပီး ႏိုင္ငံအဆင့္ခ်န္ပီယံျဖစ္ဖို႔အထိစဥ္စားၿပီး မိန္းကေလးအဖြဲ႕ကိုတည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ဒီလိုနဲ႔ႀကိဳးစားရင္းခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဖို႔အတြက္ ေဒလီကိုသြားရဖို႔ျဖစ္လာပါတယ္ ဒါေပမယ့္ကာသီတို႔အဖြဲ႕မွာ မထင္မွတ္ထားတဲ့ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သြားပါတယ္ ေဒလီမွာလူသတ္မႈ ျပန္ေပးဆြဲမႈ မုဒိမ္းမႈေတြက်ဴးလြန္ေနတဲ့အဖြဲ႕ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ မာခန္ဆင္းဂ္ဟာကတ္ဘတီအသင္းက မိန္းကေလးေတြကိုျပန္ေပးဆြဲသြားပါတယ္ ကာသီတစ္ေယာက္ကတ္ဘတီအဖြဲ႕မိန္းကေလးေတြကိုကယ္တင္ႏိုင္ၿပီး ခ်န္ပီယံရွစ္ဖလားကိုအရယူႏိုင္ပါ့မလား ဆိုတာကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ၾကည့္ရႈရမယ့္ဇာတ္လမ္းေကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္ Review – Hmue File Size –2.4GB Format…mp4 Quality :1080p WED-DL Genre : ...
IMDB: 7.5/10 486 votes
Sanak (2021) ##unicode ဒီဇာတ်ကားကတော့ ဆေးရုံကို အကြမ်းဖက်သမားတွေဝင်စီးတဲ့ အက်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းပဲဖြစ်လို့ အမိုက်စားကြည့်ရူရမယ့်ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ် ဗီဗန်ဟာ နှလုံးခွဲစိတ်မှုခံယူထားတဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ အန်ရှီကာကိုသိပ်ချစ်မြတ်နိုးပြီး တစ်နေ့ သူတို့ဆေးရုံဆင်းခါနီး ဗီဗန် ဆေးရုံစရိတ်သွားဆောင်နေတုန်း အကြမ်းဖက်သမားတွေက ဆေးရုံကိုဝင်စီးခဲ့ပါတယ် ဖြစ်စဉ်ကတော့ လက်နက်မှောင်ခိုသမားတစ်ယောက်ဟာ နှလုံးဖောက်လို အကျဉ်းထောင်ကနေ ဆေးရုံကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ် ထိုလူကို ကယ်ထုတ်သွားဖို့ အကြမ်းဖက်သမားတွေက ကြိုတင်ကြံစည်ထားပြီး ဆေးရုံကိုဝင်စီးခဲ့ပါတယ် နှလုံးရောဂါသည်ဇနီးဖြစ်သူကိုစိုးရိမ်နေတဲ့ ဗီဗန်တစ်ယောက် အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ ဆေးရုံကိုဝင်စီးမှုအောင်မြင်မလားဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်လို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ##zawgyi ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ ေဆး႐ုံကို အၾကမ္းဖက္သမားေတြဝင္စီးတဲ့ အက္ရွင္ဇာတ္ကားေကာင္းပဲျဖစ္လို႔ အမိုက္စားၾကည့္႐ူရမယ့္ဇာတ္ကားပဲျဖစ္ပါတယ္ ဗီဗန္ဟာ ႏွလုံးခြဲစိတ္မႈခံယူထားတဲ့ ဇနီးျဖစ္သူ အန္ရွီကာကိုသိပ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၿပီး တစ္ေန႔ သူတို႔ေဆး႐ုံဆင္းခါနီး ဗီဗန္ ေဆး႐ုံစရိတ္သြားေဆာင္ေနတုန္း အၾကမ္းဖက္သမားေတြက ေဆး႐ုံကိုဝင္စီးခဲ့ပါတယ္ ျဖစ္စဥ္ကေတာ့ လက္နက္ေမွာင္ခိုသမားတစ္ေယာက္ဟာ ႏွလုံးေဖာက္လို အက်ဥ္းေထာင္ကေန ေဆး႐ုံကိုေရာက္လာခဲ့ပါတယ္ ထိုလူကို ကယ္ထုတ္သြားဖို႔ အၾကမ္းဖက္သမားေတြက ႀကိဳတင္ႀကံစည္ထားၿပီး ေဆး႐ုံကိုဝင္စီးခဲ့ပါတယ္ ႏွလုံးေရာဂါသည္ဇနီးျဖစ္သူကိုစိုးရိမ္ေနတဲ့ ဗီဗန္တစ္ေယာက္ အၾကမ္းဖက္သမားေတြနဲ႔ ဘယ္လိုရင္ဆိုင္မလဲ ေဆး႐ုံကိုဝင္စီးမႈေအာင္ျမင္မလားဆိုတာ ဒီဇာတ္ကားမွာေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္လို႔ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ Review – Hmue File Size –2.4GB,1.2GB Format…mp4 Quality :1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Action Subtitle : Phyu ...
Udanpirappe (2021) ##unicode တစ်ခေါက်မှာတော့ အိန္ဒိယအက်ရှင်ဒရမ်မာကားလေးတစ်ကားကို ရွေးချယ်ထားပါတယ် ဒီကားလေးမှာဆိုရင် နာမည်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့Jyotika Sasikumar Samuthirakami တို့အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဗီရာဗာနဲ့ မာသန်ဂီဟာသိပ်ချစ်ကြတဲ့ မောင်နှမနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ဗီရာဗာဟာ မကောင်းမှုဒုစရိုက်ပြုလုပ်တဲ့သူတွေကို အင်အားသုံးအကြမ်းဖက်နည်းဖြင့်ဖြေရှင်းလေ့ရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ မာသန်ဂီရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူကတော့ စာအုပ်ကြီးသမား ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ပဲ အကျင့်စာရိတ္တမတူကြတဲ့ ဗီရာဗာနဲ့ မာသန်ဂီဟာ အဆင်မပြေကြတော့ပဲ မိသားစုကတစ်ကွဲတစ်ပြားဖြစ်သွားပါတယ် မာသန်ဂီကတော့ သူသိပ်ချစ်တဲ့ယောက်ျားနဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူကို ပြေလည်စေချင်ပြီး မိသားစုပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကို တစ်ချိန်လုံးမျှော်လင့်နေသူဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့်နှစ်တွေသာကြာလာတယ် အစ်ကိုဖြစ်သူဗီရာဗာကလည်း အင်အားသုံးတာကို မလျှော့ဘဲယောက်ျားဖြစ်သူကလည်း တဖြည်းဖြည်း စိမ်းကားလာပါတော့တယ် မာသန်ဂီရဲ့အိပ်မက်ဖြစ်တဲ့မိသားစုပြန်လည်စည်းလုံးရေးကဖြစ်နိုင်ပါ့မလား မာသန်ဂီတို့မိသားစုဘယ်လိုပြဿနာအခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့ရဦးမလဲဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ##zawgyi တစ္ေခါက္မွာေတာ့ အိႏၵိယအက္ရွင္ဒရမ္မာကားေလးတစ္ကားကို ေ႐ြးခ်ယ္ထားပါတယ္ ဒီကားေလးမွာဆိုရင္ နာမည္ႀကီးေတြျဖစ္တဲ့Jyotika Sasikumar Samuthirakami တို႔အဓိကပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ဗီရာဗာနဲ႔ မာသန္ဂီဟာသိပ္ခ်စ္ၾကတဲ့ ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္ ဗီရာဗာဟာ မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္ျပဳလုပ္တဲ့သူေတြကို အင္အားသုံးအၾကမ္းဖက္နည္းျဖင့္ေျဖရွင္းေလ့ရွိတဲ့သူျဖစ္ၿပီးေတာ့ မာသန္ဂီရဲ႕ခင္ပြန္းျဖစ္သူကေတာ့ စာအုပ္ႀကီးသမား ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္တဲ့ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္ ဒီလိုနဲ႔ပဲ အက်င့္စာရိတၱမတူၾကတဲ့ ဗီရာဗာနဲ႔ မာသန္ဂီဟာ အဆင္မေျပၾကေတာ့ပဲ မိသားစုကတစ္ကြဲတစ္ျပားျဖစ္သြားပါတယ္ မာသန္ဂီကေတာ့ သူသိပ္ခ်စ္တဲ့ေယာက္်ားနဲ႔ အစ္ကိုျဖစ္သူကို ေျပလည္ေစခ်င္ၿပီး မိသားစုျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးကို တစ္ခ်ိန္လုံးေမွ်ာ္လင့္ေနသူျဖစ္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ႏွစ္ေတြသာၾကာလာတယ္ အစ္ကိုျဖစ္သူဗီရာဗာကလည္း အင္အားသုံးတာကို မေလွ်ာ့ဘဲေယာက္်ားျဖစ္သူကလည္း တျဖည္းျဖည္း စိမ္းကားလာပါေတာ့တယ္ မာသန္ဂီရဲ႕အိပ္မက္ျဖစ္တဲ့မိသားစုျပန္လည္စည္းလုံးေရးကျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား မာသန္ဂီတို႔မိသားစုဘယ္လိုျပႆနာအခက္အခဲေတြ ႀကဳံေတြ႕ရဦးမလဲဆိုတာကိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File ...
Vinodhaya Sitham (App member only) ##unicode ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ အက်စီးဒင့်ကြောင့်သေဆုံးသွားပေမယ့် အချိန်၃လထပ်မံအသက်ရှင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ပါရာဆူရမ်ဆိုတဲ့လူရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ ပါရာဆူရမ်ဟာ ဘာမဆိုသူ့ခြေသူ့လက်လုပ်ချင်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါ မိသားစုကိစ္စ ကုမ္ပဏီအားလုံးကို သူပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒါကြောင့် သူမရှိရင် ဘာမှမလည်ပတ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ထင်ခဲ့ပါတယ် တစ်နေ့ အက်စီးဒင့်ဖြစ်ပြီး သူဆုံးပါးသွားခဲ့တဲ့အခါ သူ့ကိုလာခေါ်တဲ့သေမင်းလိုလူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် သူ ဘဝမှာလုပ်စရာတွေများလွန်းလို့ မလိုက်နိုင်သေးကြောင်း သူ့ကိုအချိန်ထပ်ပေးလိုကြောင်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ် အဲဒီလူက သူမရှိလည်း လောကကြီးလည်ပတ်နေမှာပဲဆိုတာသိစေချင်ခဲ့ပါတယ် တစ်ဘဝလုံး သူထင်ထားခဲ့တဲ့အရာတွေ တာဝန်တွေဟာ သူထင်ထားသလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိစေချင်ခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ ဂါရာဆူရမ်ကို အချိန်၃လအသက်ရှင်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ် သေရွာပြန် ဂါရာဆူရမ်တစ်ယောက် အသက်ရှင်ခွင့်ရတဲ့အချိန်၃လမှာ ဘယ်လိုဆက်လက်နေထိုင်မလဲ သူ့ဘဝရဲ့အမှားတွေကိုပြင်ဆင်နိုင်မှာလား ၃လပြီးရင် သူ့ဘဝကြီးကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရူရမှာပဲဖြစ်လို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် ##zawgyi ဒီဇာတ္လမ္းမွာေတာ့ အက္စီးဒင့္ေၾကာင့္ေသဆုံးသြားေပမယ့္ အခ်ိန္၃လထပ္မံအသက္ရွင္ခြင့္ရခဲ့တဲ့ ပါရာဆူရမ္ဆိုတဲ့လူရဲ႕ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကိုျမင္ေတြ႕ရမွာပါ ပါရာဆူရမ္ဟာ ဘာမဆိုသူ႔ေျခသူ႔လက္လုပ္ခ်င္တဲ့လူတစ္ေယာက္ပါ မိသားစုကိစၥ ကုမၸဏီအားလုံးကို သူပဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ သူမရွိရင္ ဘာမွမလည္ပတ္ႏိုင္ခဲ့ဘူးလို႔ထင္ခဲ့ပါတယ္ တစ္ေန႔ အက္စီးဒင့္ျဖစ္ၿပီး သူဆုံးပါးသြားခဲ့တဲ့အခါ သူ႔ကိုလာေခၚတဲ့ေသမင္းလိုလူတစ္ေယာက္နဲ႔ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ သူ ဘဝမွာလုပ္စရာေတြမ်ားလြန္းလို႔ မလိုက္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း သူ႔ကိုအခ်ိန္ထပ္ေပးလိုေၾကာင္းေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္ အဲဒီလူက သူမရွိလည္း ေလာကႀကီးလည္ပတ္ေနမွာပဲဆိုတာသိေစခ်င္ခဲ့ပါတယ္ တစ္ဘဝလုံး သူထင္ထားခဲ့တဲ့အရာေတြ တာဝန္ေတြဟာ သူထင္ထားသလိုမဟုတ္ဘူးဆိုတာသိေစခ်င္ခဲ့ပါတယ္ ဒီလိုနဲ႔ ဂါရာဆူရမ္ကို အခ်ိန္၃လအသက္ရွင္ခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္ ေသ႐ြာျပန္ ဂါရာဆူရမ္တစ္ေယာက္ အသက္ရွင္ခြင့္ရတဲ့အခ်ိန္၃လမွာ ဘယ္လိုဆက္လက္ေနထိုင္မလဲ သူ႔ဘဝရဲ႕အမွားေတြကိုျပင္ဆင္ႏိုင္မွာလား ...
Gully Rowdy (2021) (App only) (Free သမားများလဲ app ကနေ ကြည့်လို့ရပါတယ် ) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အိန္ဒိယအချစ်ဟာသကားလေးကို ရွေးချယ်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဗာဆူးတို့ဟာ လူမိုက်မိသားစုကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် ဗာဆူးအဘိုးရဲ့ ညာလက်ရုံးဘိုင်ရာဂီနိုင်ဒူဟာ ဗာဆူးအဖေသေသွားပြီးတဲ့နောက်မှာ နေရာလုယူပြီး ဗာဆူးအဘိုးကိုလည်းလူပုံအလယ်မှာအရှက်ခွဲခဲ့ပါတယ် အဲ့တာကြောင့်ဗာဆူးကို ဘိုင်ရာဂီကိုသတ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးဖို့ စီစဉ်ပါတော့တယ် ဒါပေမယ့် ဗာဆူးကတော့ လူမိုက်မဖြစ်ချင်ဘဲ ဘဝကိုသာမန်ပဲဖြတ်သန်းချင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ ဗာဆူးဟာသူ့အဘိုးရဲ့ဆန္ဒအတိုင်း လူမိုက်တစ်ယောက်အဖြစ်အဆုံးသတ်သွားမလား ဘယ်လိုအလှည့်အပြောင်းတွေကြုံရဦးမလဲဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ အိႏၵိယအခ်စ္ဟာသကားေလးကို ေ႐ြးခ်ယ္ထားပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ဗာဆူးတို႔ဟာ လူမိုက္မိသားစုကေန ဆင္းသက္လာတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္ ဗာဆူးအဘိုးရဲ႕ ညာလက္႐ုံးဘိုင္ရာဂီႏိုင္ဒူဟာ ဗာဆူးအေဖေသသြားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေနရာလုယူၿပီး ဗာဆူးအဘိုးကိုလည္းလူပုံအလယ္မွာအရွက္ခြဲခဲ့ပါတယ္ အဲ့တာေၾကာင့္ဗာဆူးကို ဘိုင္ရာဂီကိုသတ္ႏိုင္တဲ့သူျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးဖို႔ စီစဥ္ပါေတာ့တယ္ ဒါေပမယ့္ ဗာဆူးကေတာ့ လူမိုက္မျဖစ္ခ်င္ဘဲ ဘဝကိုသာမန္ပဲျဖတ္သန္းခ်င္တဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ ဗာဆူးဟာသူ႔အဘိုးရဲ႕ဆႏၵအတိုင္း လူမိုက္တစ္ေယာက္အျဖစ္အဆုံးသတ္သြားမလား ဘယ္လိုအလွည့္အေျပာင္းေတြႀကဳံရဦးမလဲဆိုတာကိုေတာ့ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size –2.4GB Format…mp4 Quality :1080p WED-DL Genre : Animation,Aventure Subtitle :Phyu Sin Encoded by Arrow ========================================================================================================= App ဒေါင်းရန္ App Link မန်ဘာဝင်လိုသူများ viber – 09691177142
Escape from Mogadishu (2021) ##unicode ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ rating 8အထိရရှိထားပြီး 24million အကုန်အကျခံရိုက်ကူးထားပြီး Action အမျိုးအစားကားဖြစ်ပါတယ် Cast တွေကတော့ Kim Yoon Seok,Jo In Sung,Heo Joon Ho တို့အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ၁၉၉၁ ခုနှစ် Mogadishu မြို့တော် ဆိုမလီယာမှာ အာဏာရှင်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်ပြီး စစ်ဖြစ်ကြပါတော့တယ် အဲ့ဒီက ကိုရီးယားသံအမတ်အဖြစ်ရောက်နေတဲ့ သံအမတ်နဲ့ အကြံပေးဂန်တို့က ဘယ်လိုလွတ်အောင်ကြိုးစားပြီး ထွက်ပြေးမလဲ?? ဘေးအန္တရာယ်ကင်းကင်း လွတ်မြေက်ပါ့မလား??? ဆိုတာကို စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi ဒီဇာတ္ကားေလးကေတာ့ rating 8အထိရ႐ွိထားၿပီး 24million အကုန္အက်ခံ႐ိုက္ကူးထားျပီး Action အမ်ိဳးအစားကားျဖစ္ပါတယ္ Cast ေတြကေတာ့ Kim Yoon Seok,Jo In Sung,Heo Joon Ho တို႔အဓိကပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းေလးကေတာ့ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ Mogadishu ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆိုမလီယာမွာ အာဏာရွင္အစိုးရကိုဆန္႔က်င္ၿပီး စစ္ျဖစ္ၾကပါေတာ့တယ္ အဲ့ဒီက ကိုရီးယားသံအမတ္အျဖစ္ေရာက္ေနတဲ့ သံအမတ္နဲ့ အၾကံေပးဂန္တို႔က ဘယ္လိုလြတ္ေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး ထြက္ေျပးမလဲ?? ေဘးအနၱရာယ္ကင္းကင္း လြတ္ေျမက္ပါ့မလား??? ဆိုတာကို စိတ္ဝင္တစားၾကည့္႐ႈရမယ့္ ဇာတ္ကားေကာင္းတစ္ကားျဖစ္ပါတယ္ Review – ...
IMDB: 7.5/10 275 votes
The Cinderella Addiction (2021) ##unicode ဒီဇာတ်ကားကတော့ မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက် ကိုယ်တိုင်မိခင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ သူ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ပုံဖော်ရိုက်ကူးပြထားတဲ့ဇာတ်လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ် မိန်းကလေးတိုင်းက ကောင်းကောင်းလက်ထပ်ချင်တယ် မိခင်ကောင်းဖြစ်ချင်ကြပါတယ် ငယ်ငယ်က မိခင်စွန့်ပစ်သွားတာကိုခံခဲ့ရတဲ့ ကိုဟာယုကတော့ သူများတွေထက်ပိုပြီး မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့ပါတယ် တစ်နေ့ မုဆိုးဖိုတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အီဇူမီဆာဝါနဲ့ သူတွေ့ခဲ့ပြီးလက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် အီဇူမီဆာဝါမှာက ဟီကာရီဆိုတဲ့သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ် ကိုဟာယုဟာ ချက်ချင်းပဲ မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့ အစပိုင်းမှာတော့ ဟီကာရီနဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေခဲ့လို့ သူ မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်ခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် သူထင်ထားခဲ့သလို အမေတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကမလွယ်ကူကြောင်း အထူးသဖြင့် မိထွေးဖြစ်လာခဲ့ရတဲ့ ကိုဟာယုရဲ့ဘဝအခက်အခဲတွေ ဘယ်လိုကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်လို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ##zawgyi ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ မိခင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္ခဲ့တဲ့မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ကိုယ္တိုင္မိခင္ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ သူ႔ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကို ပုံေဖာ္႐ိုက္ကူးျပထားတဲ့ဇာတ္လမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္ မိန္းကေလးတိုင္းက ေကာင္းေကာင္းလက္ထပ္ခ်င္တယ္ မိခင္ေကာင္းျဖစ္ခ်င္ၾကပါတယ္ ငယ္ငယ္က မိခင္စြန႔္ပစ္သြားတာကိုခံခဲ့ရတဲ့ ကိုဟာယုကေတာ့ သူမ်ားေတြထက္ပိုၿပီး မိခင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္ခဲ့ပါတယ္ တစ္ေန႔ မုဆိုးဖိုတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ အီဇူမီဆာဝါနဲ႔ သူေတြ႕ခဲ့ၿပီးလက္ထပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ အီဇူမီဆာဝါမွာက ဟီကာရီဆိုတဲ့သမီးေလးတစ္ေယာက္ရွိပါတယ္ ကိုဟာယုဟာ ခ်က္ခ်င္းပဲ မိခင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သြားခဲ့တာေပါ့ အစပိုင္းမွာေတာ့ ဟီကာရီနဲ႔ဆက္ဆံေရးအဆင္ေျပခဲ့လို႔ သူ မိခင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ႏိုင္မယ္ထင္ခဲ့ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ သူထင္ထားခဲ့သလို အေမတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘဝကမလြယ္ကူေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ မိေထြးျဖစ္လာခဲ့ရတဲ့ ကိုဟာယုရဲ႕ဘဝအခက္အခဲေတြ ဘယ္လိုႀကဳံေတြ႕ရမလဲဆိုတာ ဒီဇာတ္ကားမွာျမင္ေတြ႕ရမွာပဲျဖစ္လို႔ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ Review – Hmue File Size –2.4GB,1GB Format…mp4 Quality :1080p WED-DL,720p WED-DL Genre ...
Bright: Samurai Soul (2021) ##unicode ဒီဇာတ်ကားကတော့ 2017ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့ပြီး အခုထက်တိုင်အောင်မြင်မှုရရှိထားတဲ့ မင်းသားWill Smithရဲ့ Brightဇာတ်ကားကို Japan animeပုံစံရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ် နတ်သူငယ်တွေ ဆာမူရိုင်းတွေ ဘီလူးတွေ မတူညီတဲ့မျိုးနွယ်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့ ဂျပန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးခေတ်မှာ အစိုးရအာဏာပိုင်တွေနဲ့လူဆိုးဂိုဏ်းတစ်ခုက တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ မှော်ကြိမ်လုံးတစ်ခုရဲ့စွမ်းအားတွေကိုလိုချင်ခဲ့ပါတယ် အဲဒီမှော်ကြိမ်လုံးရဲ့အစွမ်းကိုအသုံးချနိုင်တာက နတ်သူငယ်တွေပါ ဒါကြောင့် သူတို့ဟာ နတ်သူငယ်တွေကိုလိုက်ဖမ်းနေခဲ့ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ မိဘမဲ့နတ်သူငယ်လေးကို လူဆိုးတွေအန္တရာယ်နဲ့ဝေးရာ နတ်သူငယ်တိုင်းပြည်ကိုပို့ပေးဖို့ ဘီလူးတစ်ကောင်နဲ့ ဆာမူရိုင်းဟောင်းတစ်ယောက်က ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ဇာတ်လမ်းကို ပုံဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် နာမည်ကြီး Brightဇာတ်ကားကို Japan animeအဖြစ် အသစ်အဆန်းပုံစံနဲ့ကြည့်ရူရမှာဖြစ်လို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ##zawgyi ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ 2017ခုႏွစ္ကထြက္ရွိခဲ့ၿပီး အခုထက္တိုင္ေအာင္ျမင္မႈရရွိထားတဲ့ မင္းသားWill Smithရဲ႕ Brightဇာတ္ကားကို Japan animeပုံစံ႐ိုက္ကူးထားတာျဖစ္ပါတယ္ နတ္သူငယ္ေတြ ဆာမူ႐ိုင္းေတြ ဘီလူးေတြ မတူညီတဲ့မ်ိဳးႏြယ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိတဲ့ ဂ်ပန္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေခတ္မွာ အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔လူဆိုးဂိုဏ္းတစ္ခုက တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ ေမွာ္ႀကိမ္လုံးတစ္ခုရဲ႕စြမ္းအားေတြကိုလိုခ်င္ခဲ့ပါတယ္ အဲဒီေမွာ္ႀကိမ္လုံးရဲ႕အစြမ္းကိုအသုံးခ်ႏိုင္တာက နတ္သူငယ္ေတြပါ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ဟာ နတ္သူငယ္ေတြကိုလိုက္ဖမ္းေနခဲ့ပါတယ္ ဒီဇာတ္ကားမွာေတာ့ မိဘမဲ့နတ္သူငယ္ေလးကို လူဆိုးေတြအႏၲရာယ္နဲ႔ေဝးရာ နတ္သူငယ္တိုင္းျပည္ကိုပို႔ေပးဖို႔ ဘီလူးတစ္ေကာင္နဲ႔ ဆာမူ႐ိုင္းေဟာင္းတစ္ေယာက္က ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးတဲ့ဇာတ္လမ္းကို ပုံေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္ နာမည္ႀကီး Brightဇာတ္ကားကို Japan animeအျဖစ္ အသစ္အဆန္းပုံစံနဲ႔ၾကည့္႐ူရမွာျဖစ္လို႔ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ Review – Hmue File Size –2.4GB,1GB Format…mp4 Quality :1080p ...
Boonie Bears: To the Rescue (2021) (App member only) ##unicode အခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဇာတ်ကားလေးကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကြည့်ရူရမယ့် အတော်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကားတွန်းကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ဘရိုင်ရာ၊ ဘရန်ပယ်လို့ခေါ်တဲ့ဝက်ဝံနှစ်ကောင်နဲ့ ဗစ်ဆိုတဲ့ထိပ်ပြောင်ခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ယောက် ရှေးခေတ်ကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ပြီး လူစုကွဲသွားခဲ့ပါတယ် ဘရိုင်ရာက ဖေးဖေးလို့ခေါ်တဲ့ဝံပုလွေပေါက်လေးနဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ် ဖေးဖေးကတော့ သတ္တိမရှိလို့ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ဝံပုလွေအုပ်ကပယ်ထားတဲ့သူလေးပါ ဖေးဖေးက ဘရိုင်ရာကို ဘရန်ပယ်၊ ဗစ်တို့နဲ့ပြန်ဆုံအောင် သူကူညီပေးမယ် သူ့ကို သတ္တိရှိလာအောင် သတ္တိသစ်သီးကူခူးပေးဆိုပြီး ဘရိုင်ရာကိုပြောခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ ချစ်စရာဝံပုလွေပေါက်လေး ဖေးဖေးရဲ့အကြောင်းကိုလည်း ဒီဇာတ်ကားမှာကြည့်ရမှာပါ ဘရန်ပယ်နဲ့ဗစ်ကတော့ လူရိုင်းအုပ်စုဆီကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ် သူတို့ကိုစားတော့မယ့်လူရိုင်းအုပ်လက်က ဘရန်ပယ်တို့ဘယ်လိုလွတ်မြောက်လာလဲ ဘယ်လိုတွေရင်းနှီးသွားခဲ့ကြမလဲ နောက်ဆုံးမှာ သူတို့၃ယောက် သူတို့ခေတ်ကိုဘယ်လိုပြန်ရောက်အောင်သွားကြမလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာစောင့်မျှော်အားပေးရမှာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့အလွဲလုပ်ရပ်တွေကိုရယ်ရယ်မောမောနဲ့ကြည့်ရူရမယ့်ကာတွန်းဇာတ်ကားကောင်းလေးပဲဖြစ်လို့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ##zawgyi အခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဇာတ်ကားလေးကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကြည့်ရူရမယ့် အတော်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကားတွန်းကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ဘရိုင်ရာ၊ ဘရန်ပယ်လို့ခေါ်တဲ့ဝက်ဝံနှစ်ကောင်နဲ့ ဗစ်ဆိုတဲ့ထိပ်ပြောင်ခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ယောက် ရှေးခေတ်ကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ပြီး လူစုကွဲသွားခဲ့ပါတယ် ဘရိုင်ရာက ဖေးဖေးလို့ခေါ်တဲ့ဝံပုလွေပေါက်လေးနဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ် ဖေးဖေးကတော့ သတ္တိမရှိလို့ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ဝံပုလွေအုပ်ကပယ်ထားတဲ့သူလေးပါ ဖေးဖေးက ဘရိုင်ရာကို ဘရန်ပယ်၊ ဗစ်တို့နဲ့ပြန်ဆုံအောင် သူကူညီပေးမယ် သူ့ကို သတ္တိရှိလာအောင် သတ္တိသစ်သီးကူခူးပေးဆိုပြီး ဘရိုင်ရာကိုပြောခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ ချစ်စရာဝံပုလွေပေါက်လေး ဖေးဖေးရဲ့အကြောင်းကိုလည်း ဒီဇာတ်ကားမှာကြည့်ရမှာပါ ဘရန်ပယ်နဲ့ဗစ်ကတော့ လူရိုင်းအုပ်စုဆီကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ် သူတို့ကိုစားတော့မယ့်လူရိုင်းအုပ်လက်က ဘရန်ပယ်တို့ဘယ်လိုလွတ်မြောက်လာလဲ ဘယ်လိုတွေရင်းနှီးသွားခဲ့ကြမလဲ နောက်ဆုံးမှာ သူတို့၃ယောက် သူတို့ခေတ်ကိုဘယ်လိုပြန်ရောက်အောင်သွားကြမလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာစောင့်မျှော်အားပေးရမှာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့အလွဲလုပ်ရပ်တွေကိုရယ်ရယ်မောမောနဲ့ကြည့်ရူရမယ့်ကာတွန်းဇာတ်ကားကောင်းလေးပဲဖြစ်လို့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Review – Phyu Sin File Size –2.4GB Format…mp4 Quality :1080p WED-DL Genre ...
Boonie Bears: To the Rescue (2021)
Boonie Bears: Blast into the Past (App member only) ##unicode အခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဇာတ်ကားလေးကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကြည့်ရူရမယ့် အတော်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကားတွန်းကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ဘရိုင်ရာ၊ ဘရန်ပယ်လို့ခေါ်တဲ့ဝက်ဝံနှစ်ကောင်နဲ့ ဗစ်ဆိုတဲ့ထိပ်ပြောင်ခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ယောက် ရှေးခေတ်ကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ပြီး လူစုကွဲသွားခဲ့ပါတယ် ဘရိုင်ရာက ဖေးဖေးလို့ခေါ်တဲ့ဝံပုလွေပေါက်လေးနဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ် ဖေးဖေးကတော့ သတ္တိမရှိလို့ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ဝံပုလွေအုပ်ကပယ်ထားတဲ့သူလေးပါ ဖေးဖေးက ဘရိုင်ရာကို ဘရန်ပယ်၊ ဗစ်တို့နဲ့ပြန်ဆုံအောင် သူကူညီပေးမယ် သူ့ကို သတ္တိရှိလာအောင် သတ္တိသစ်သီးကူခူးပေးဆိုပြီး ဘရိုင်ရာကိုပြောခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ ချစ်စရာဝံပုလွေပေါက်လေး ဖေးဖေးရဲ့အကြောင်းကိုလည်း ဒီဇာတ်ကားမှာကြည့်ရမှာပါ ဘရန်ပယ်နဲ့ဗစ်ကတော့ လူရိုင်းအုပ်စုဆီကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ် သူတို့ကိုစားတော့မယ့်လူရိုင်းအုပ်လက်က ဘရန်ပယ်တို့ဘယ်လိုလွတ်မြောက်လာလဲ ဘယ်လိုတွေရင်းနှီးသွားခဲ့ကြမလဲ နောက်ဆုံးမှာ သူတို့၃ယောက် သူတို့ခေတ်ကိုဘယ်လိုပြန်ရောက်အောင်သွားကြမလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာစောင့်မျှော်အားပေးရမှာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့အလွဲလုပ်ရပ်တွေကိုရယ်ရယ်မောမောနဲ့ကြည့်ရူရမယ့်ကာတွန်းဇာတ်ကားကောင်းလေးပဲဖြစ်လို့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ##zawgyi အခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဇာတ်ကားလေးကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကြည့်ရူရမယ့် အတော်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကားတွန်းကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ဘရိုင်ရာ၊ ဘရန်ပယ်လို့ခေါ်တဲ့ဝက်ဝံနှစ်ကောင်နဲ့ ဗစ်ဆိုတဲ့ထိပ်ပြောင်ခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ယောက် ရှေးခေတ်ကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ပြီး လူစုကွဲသွားခဲ့ပါတယ် ဘရိုင်ရာက ဖေးဖေးလို့ခေါ်တဲ့ဝံပုလွေပေါက်လေးနဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ် ဖေးဖေးကတော့ သတ္တိမရှိလို့ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ဝံပုလွေအုပ်ကပယ်ထားတဲ့သူလေးပါ ဖေးဖေးက ဘရိုင်ရာကို ဘရန်ပယ်၊ ဗစ်တို့နဲ့ပြန်ဆုံအောင် သူကူညီပေးမယ် သူ့ကို သတ္တိရှိလာအောင် သတ္တိသစ်သီးကူခူးပေးဆိုပြီး ဘရိုင်ရာကိုပြောခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ ချစ်စရာဝံပုလွေပေါက်လေး ဖေးဖေးရဲ့အကြောင်းကိုလည်း ဒီဇာတ်ကားမှာကြည့်ရမှာပါ ဘရန်ပယ်နဲ့ဗစ်ကတော့ လူရိုင်းအုပ်စုဆီကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ် သူတို့ကိုစားတော့မယ့်လူရိုင်းအုပ်လက်က ဘရန်ပယ်တို့ဘယ်လိုလွတ်မြောက်လာလဲ ဘယ်လိုတွေရင်းနှီးသွားခဲ့ကြမလဲ နောက်ဆုံးမှာ သူတို့၃ယောက် သူတို့ခေတ်ကိုဘယ်လိုပြန်ရောက်အောင်သွားကြမလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာစောင့်မျှော်အားပေးရမှာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့အလွဲလုပ်ရပ်တွေကိုရယ်ရယ်မောမောနဲ့ကြည့်ရူရမယ့်ကာတွန်းဇာတ်ကားကောင်းလေးပဲဖြစ်လို့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Review – Hmue File Size –2.4GB Format…mp4 Quality :1080p WED-DL Genre : ...
Jinde Meriye (2021) (App member only) ##unicode ကောလိပ်က ပါမောက္ခရဲ့သမီးနဲ့ ကြိုက်နေတဲ့ရာဒီနိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်ချင်ရင် အောင်မှတ် ၇၀ရမှဖြစ်မယ်ဆိုလို့ ရာဒီက စာမကြိုးစားဘဲ စာမေးပွဲမေးခွန်းကို ခိုးလိုက်တဲ့အခါ ပါမောက္ခက အလုပ်က ရပ်ဆိုင်းခံလိုက်ရပါတယ်။ သူ့သမီးနဲ့ရာဒီကို သဘောမတူတော့တာကြောင့် သူ့သမီးကို စကော့တလန်ပို့လိုက်တဲ့အခါ ရာဒီကလည်း စကော့တလန်ကို လိုက်လာပါတယ်။ရာဒီအဖေက မရှိမဲ့ရှိမဲ့ငွေလေးနဲ့ နိုင်ငံခြားကို ပို့လိုက်ပေမယ့် ရာဒီအလိမ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ ရာဒီ စကော့တလန်ကို ရောက်သွားတဲ့အခါ ဘယ်လိုနေမလဲ၊ သူချစ်တဲ့ရေမက်ကိုရော တွေ့ရပါ့မလားဆိုတာကို ကြည့်ရှုရမှာပါ။ ဝမ်းနည်းတတ်ရင်တော့ ဒီဇာတ်ကားကြည့်တဲ့အခါတစ်ရှူးဆောင်ထားပါ။ ##zawgyi ​ေကာလိပ္က ​ပါ​​ေမာကၡရဲ့သမီးနဲ႔ ႀကိဳက္​ေနတဲ့ရာဒီ​နိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္လုပ္ခ်င္ရင္ ​​ေအာင္မွတ္ ၇၀ရမွျဖစ္မယ္ဆိုလို႔ ရာဒီက စာမႀကိဳးစားဘဲ စာ​ေမးပြဲ​ေမးခြန္းကို ခိုးလိုက္တဲ့အခါ ပါ​ေမာကၡက အလုပ္က ရပ္ဆိုင္းခံလိုက္ရပါတယ္။ သူ႔သမီးနဲ႔ရာဒီကို သ​ေဘာမတူ​ေတာ့​တာ​ေၾကာင့္ သူ႔သမီးကို စ​ေကာ့တလန္ပို႔လိုက္တဲ့အခါ ရာဒီကလည္း စ​ေကာ့တလန္ကို ​လိုက္လာပါတယ္။ရာဒီအ​ေဖက မရွိမဲ့ရွိမဲ့​ေငြ​ေလးနဲ႔ နိုင္ငံျခားကို ပို႔လိုက္​ေပမယ့္ ရာဒီအလိမ္ခံလိုက္ရပါတယ္။ ရာဒီ စ​ေကာ့တလန္ကို ​ေရာက္သြားတဲ့အခါ ဘယ္လို​ေနမလဲ၊ သူခ်စ္တဲ့​ေရမက္ကို​ေရာ ​ေတြ႕ရပါ့မလားဆိုတာကို ၾကည့္ရွုရမွာပါ။ ဝမ္းနည္းတတ္ရင္​ေတာ့ ဒီဇာတ္ကားၾကည့္တဲ့အခါတစ္ရွူး​ေဆာင္ထားပါ။ Review – Mya File Size – 2.4GB Format…mp4 Quality ...
Jinde Meriye (2021)
Survive the Game (2021) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ မင်းသားကြီး Bruce Willis ပါဝင်ထားတဲ့2021ထွက် အက်ရှင်ကားလေးတစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် Survive The Night ဆိုတဲ့ကားလေးဖြစ်ပြီးတော့ Box office မှာလည်း $ 54,022 အထိရရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ရဲအရာရှိနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်နဲ့ကယ်လ်ဟာ မူးယစ်ဆေးဝါးမှောင်ခိုရောင်းတဲ့သူတွေနောက်ကို လိုက်ရင်းအခြေအနေမဟန်ဘဲ ဒေးဗစ်တစ်ယောက်သေနတ်ဒဏ်ရာရသွားသလို လူဆိုးတွေလည်းထွက်ပြေးသွားပါတယ် ကယ်လ်တစ်ယောက် လူဆိုးတွေနောက်ကိုလိုက်ရင်း လူသူဝေးလံတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ အဲရစ်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားပါတော့တယ် အဲရစ်တစ်ယောက် မထင်မှတ်ဘဲရောက်လာတဲ့လူဆိုးတွေနဲ့ ရဲကြားမှာဓားစာခံဖြစ်ရပါတော့တယ် ကယ်လ်နဲ့အဲရစ်တို့လူဆိုးတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်သွားမလဲ လူဆိုးတွေလက်ထဲကနေလွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ မင္းသားႀကီး Bruce Willis ပါ၀င္ထားတဲ့2021ထြက္ အက္ရွင္ကားေလးတစ္ကားကို တင္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္ Survive The Night ဆိုတဲ့ကားေလးျဖစ္ၿပီးေတာ့ Box office မွာလည္း $ 54,022 အထိရရွိထားတဲ့ဇာတ္ကားေကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ရဲအရာရွိႏွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ေဒးဗစ္နဲ႔ကယ္လ္ဟာ မူးယစ္ေဆးဝါးေမွာင္ခိုေရာင္းတဲ့သူေတြေနာက္ကို လိုက္ရင္းအေျခအေနမဟန္ဘဲ ေဒးဗစ္တစ္ေယာက္ေသနတ္ဒဏ္ရာရသြားသလို လူဆိုးေတြလည္းထြက္ေျပးသြားပါတယ္ ကယ္လ္တစ္ေယာက္ လူဆိုးေတြေနာက္ကိုလိုက္ရင္း လူသူေဝးလံတဲ့ေနရာမွာရွိတဲ့ အဲရစ္ရဲ႕အိမ္ကိုေရာက္သြားပါေတာ့တယ္ အဲရစ္တစ္ေယာက္ မထင္မွတ္ဘဲေရာက္လာတဲ့လူဆိုးေတြနဲ႔ ရဲၾကားမွာဓားစာခံျဖစ္ရပါေတာ့တယ္ ကယ္လ္နဲ႔အဲရစ္တို႔လူဆိုးေတြကိုဘယ္လိုရင္ဆိုင္သြားမလဲ လူဆိုးေတြလက္ထဲကေနလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာကိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1.2GB,2.4GB Format…mp4 Quality :1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Action,Thriller Subtitle ...
Ida Red (2021) ##unicode ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Ida Red ဆိုတဲ့အမေရိကန်မှုခင်းဒရမ်မာကားလေးဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ရာဇဝတ်မှုခေါင်းဆောင်အိုင်ဒါဝေါ်ကာဟာ ဘဏ်ဓားပြမှုအပြီးမှာအဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ် ဒီလိုနဲ့နှစ်တွေကြာပြီးနောက်မှာတော့ ရောဂါခံစားနေရပြီးအသက်ရှင်ရဖို့အချိန်သိပ်မကျန်တော့တဲ့ အိုင်ဒါဟာထောင်ထဲကထုတ်ပေးဖို့ သားဖြစ်သူဝက်ထ်ကို တောင်းဆိုပါတော့တယ် ဝက်ထ်တစ်ယောက်အမေဖြစ်သူကိုထောင်ထဲကထုတ်ပေးနိုင်ဖို့နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးစားပါတယ် သေချာပေါက် မကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဒုစရိုက်မှုတွေလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ် အိုင်ဒါတစ်ယောက်သားဖြစ်သူရဲ့အကူအညီနဲ့ ထောင်ထဲကထွက်လာနိုင်မလား ဝက်ထ်အနေနဲ့ရော ရာဇဝတ်မှုတွေကနေ ရှောင်လွှဲနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ခါတင္ဆက္ေပးမွာကေတာ့ Ida Red ဆိုတဲ့အေမရိကန္မႈခင္းဒရမ္မာကားေလးျဖစ္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ရာဇဝတ္မႈေခါင္းေဆာင္အိုင္ဒါေဝၚကာဟာ ဘဏ္ဓားျပမႈအၿပီးမွာအဖမ္းခံလိုက္ရပါတယ္ ဒီလိုနဲ႔ႏွစ္ေတြၾကာၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ေရာဂါခံစားေနရၿပီးအသက္ရွင္ရဖို႔အခ်ိန္သိပ္မက်န္ေတာ့တဲ့ အိုင္ဒါဟာေထာင္ထဲကထုတ္ေပးဖို႔ သားျဖစ္သူဝက္ထ္ကို ေတာင္းဆိုပါေတာ့တယ္ ဝက္ထ္တစ္ေယာက္အေမျဖစ္သူကိုေထာင္ထဲကထုတ္ေပးႏိုင္ဖို႔နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ ႀကိဳးစားပါတယ္ ေသခ်ာေပါက္ မေကာင္းတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ဒုစ႐ိုက္မႈေတြလည္းအပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္ အိုင္ဒါတစ္ေယာက္သားျဖစ္သူရဲ႕အကူအညီနဲ႔ ေထာင္ထဲကထြက္လာႏိုင္မလား ဝက္ထ္အေနနဲ႔ေရာ ရာဇဝတ္မႈေတြကေန ေရွာင္လႊဲႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာကိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းထဲမွာ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 2.4GB Format…mp4 Quality :1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Action,Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow
American Insurrection (2021) (App member only) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ဇာတ်လမ်းပုံစံလေးနည်းနည်းထူးခြားတဲ့ကားလေးကိုရွေးချယ်ထားပါတယ် "American Insurrection"ဆိုတဲ့ကားလေးဖြစ်ပြီးတော့ Action, Mystery/Thriller အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကတော့အမေရိကန်မှာ "volunteers"ဆိုတဲ့စစ်တပ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ လူတွေကိုဘားကုဒ်တွေနဲ့ခွဲခြားပြီးဘားကုဒ်မရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ လူမည်းတွေ လိင်ပြောင်းသူတွေကို ဖိနှိပ်သတ်ဖြတ်တာမျိုးလုပ်လာပါတယ် ဒီလိုကြမ်းတမ်းရက်စက်ပြီးဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တတ်တဲ့နေရာကနေ နယ်စပ်ကတစ်ဆင့် ကနေဒါနိုင်ငံထဲကိုထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားကြတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်စုအကြောင်းကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့်ကားလေးပါ သူတို့သူငယ်ချင်းတစ်စုနယ်စပ်ကနေလွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား ဘယ်လိုအန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရဦးမလဲဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာစောင့်ကြည့်ပေးကြပါနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ ဇာတ္လမ္းပုံစံေလးနည္းနည္းထူးျခားတဲ့ကားေလးကိုေ႐ြးခ်ယ္ထားပါတယ္ "American Insurrection"ဆိုတဲ့ကားေလးျဖစ္ၿပီးေတာ့ Action, Mystery/Thriller အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာေလးကေတာ့အေမရိကန္မွာ "volunteers"ဆိုတဲ့စစ္တပ္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုေပၚလာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ လူေတြကိုဘားကုဒ္ေတြနဲ႔ခြဲျခားၿပီးဘားကုဒ္မရွိတဲ့သူေတြျဖစ္တဲ့ လူမည္းေတြ လိင္ေျပာင္းသူေတြကို ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္တာမ်ိဳးလုပ္လာပါတယ္ ဒီလိုၾကမ္းတမ္းရက္စက္ၿပီးဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တတ္တဲ့ေနရာကေန နယ္စပ္ကတစ္ဆင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံထဲကိုထြက္ေျပးဖို႔ ႀကိဳးစားၾကတဲ့သူငယ္ခ်င္းတစ္စုအေၾကာင္းကို စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ၾကည့္ရႈရမယ့္ကားေလးပါ သူတို႔သူငယ္ခ်င္းတစ္စုနယ္စပ္ကေနလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါ့မလား ဘယ္လိုအႏၲရာယ္ေတြႀကဳံေတြ႕ရဦးမလဲဆိုတာကိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းထဲမွာေစာင့္ၾကည့္ေပးၾကပါေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 2.4GB Format…mp4 Quality :1080p WED-DL Genre : Action,Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow ========================================================================================================= App ဒေါင်းရန္ App Link မန်ဘာဝင်လိုသူများ viber – 09691177142
Raja Raja Chora (2021) (App member only) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အိန္ဒိယဟာသကားလေးကို အပျင်းပြေကြည့်ရှုရအောင်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဘာစကာဟာမယ်မယ်ရရအလုပ်ကိုင်မရှိဘဲ ကြုံရာကျပန်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ရင်း အသက်မွေးတဲ့သူပါ သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဗစ်ဒရာမသိအောင် ဆန်ဂျနာဆိုတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုလည်းအိမ်ထောင်မရှိလူပျိုလူလွတ် ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာဆိုပြီးလိမ်လည်တွဲနေပါသေးတယ် ဘာစကာဟာပိုက်ဆံရဖို့အတွက်အိမ်ဖောက်ထွင်းခိုးယူတာအထိလုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ် တစ်ရက်မှာတော့အက်စ်အိုင်ဝီလီယမ်ဟာ ဓားပြမှုကိုစုံစမ်းရင်း ဘာစကာကိုသံသယဝင်လာပါတော့တယ် တိုက်ဆိုင်စွာဘဲရဲအရာရှိဝီလီယမ်ဟာဆန်ဂျနာရဲ့ဦးလေးပါဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတော့... ဘာစကာတစ်ယောက်သူ့အရှုပ်တွေကြားမှာဘယ်လိုတွေတိုင်ပတ်ဦးမလဲဆိုတာကို ဟာသဆန်ဆန်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးကြည့်ရှုရမယ့်ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ အိႏၵိယဟာသကားေလးကို အပ်င္းေျပၾကည့္ရႈရေအာင္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ဘာစကာဟာမယ္မယ္ရရအလုပ္ကိုင္မရွိဘဲ ႀကဳံရာက်ပန္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ရင္း အသက္ေမြးတဲ့သူပါ သူ႔ရဲ႕ဇနီးျဖစ္သူဗစ္ဒရာမသိိေအာင္ ဆန္ဂ်နာဆိုတဲ့ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကိုလည္းအိမ္ေထာင္မရွိလူပ်ိဳလူလြတ္ ေဆာ့ဖ္ဝဲအင္ဂ်င္နီယာဆိုၿပီးလိမ္လည္တြဲေနပါေသးတယ္ ဘာစကာဟာပိုက္ဆံရဖို႔အတြက္အိမ္ေဖာက္ထြင္းခိုးယူတာအထိလုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္ တစ္ရက္မွာေတာ့အက္စ္အိုင္ဝီလီယမ္ဟာ ဓားျပမႈကိုစုံစမ္းရင္း ဘာစကာကိုသံသယဝင္လာပါေတာ့တယ္ တိုက္ဆိုင္စြာဘဲရဲအရာရွိဝီလီယမ္ဟာဆန္ဂ်နာရဲ႕ဦးေလးပါျဖစ္ေနတဲ့အခါမွာေတာ့... ဘာစကာတစ္ေယာက္သူ႔အရႈပ္ေတြၾကားမွာဘယ္လိုေတြတိုင္ပတ္ဦးမလဲဆိုတာကို ဟာသဆန္ဆန္ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလးၾကည့္ရႈရမယ့္ဇာတ္ကားေလးျဖစ္ပါတယ္ Review – Hmue File Size – 1.2GB,2.4GB Format…mp4 Quality :1080p WED-DL,7120p WED-DL Genre : Dram,Comedy Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue & Phyu Sin Encoded by Arrow ========================================================================================================= App ဒေါင်းရန္ App Link မန်ဘာဝင်လိုသူများ viber – 09691177142
IMDB: 8.4/10 561 votes
Endravathu oru naal (2021) ##unicode Endravathu oru naalဇာတ်ကားမှာတော့ Thangamuthuဟာ နွားမွေးမြူရေးနဲ့ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပြီး နွားတွေကို သံယောဇဉ်ကြီးမားသူလဲဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့သူ့ဇနီး Rasathiဟာ လက်ထပ်ထားတာ လေးနှစ်ရှိနေပေမဲ့ ကလေးမရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်။Thangamuthuကကလေးအတွက် မစိုးရိမ်ဖို့ Rasathiကိုဖျောင်းဖျခဲ့ပေမဲ့ Rasathiကတော့ ဘုရားကျောင်းမှာသွားဆုတောင်းဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ ဘုရားကျောင်းမှာ ဆုတောင်းပြီးနောက်မှာဘဲ Rasathiနဲ့အတူ သူတို့အိမ်က နွားမLashkmiကပါကိုယ်ဝန်ရခဲ့ကြတယ်။ Thangamuthuကတော့ သူတို့သားလေးမွေးဖွားတဲ့နေ့မှာဘဲ မတော်မဆဖြစ်ကာ သေဆုံးသွားခဲ့ရတယ်။ Rasathiဟာ တစ်ကိုယ်တည်းမုဆိုးမအဖြစ်နဲ့ သားလေးMurugaကို ပင်ပင်ပန်းပန်းစောင့်ရှောက်ရပါတော့တယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ အကြွေးမပေးနိုင်လို့ နွားမLashkmiမွေးဖွားခဲ့တဲ့ နွား၂ကောင်ကို အကြွေးရှင်တွေက သိမ်းသွားတာကြောင့် Rasathiတို့သားအမိနှစ်ယောက်မှာ လုပ်ကိုင်စားသောက်စရာ နွားတွေမရှိတော့တာကြောင့် သူတို့ဘဝအခြေအနေကပိုပြီးခက်ခဲလာခဲ့တယ်။Rasathiတစ်ယောက် အကြွေးရှင်တွေဆီက နွားတွေဘယ်လိုပြန်ယူမလဲ။ သူ့အမေရဲ့ အခက်အခဲတွေကို တွေ့မြင်နေရတဲ့Murugaကရော သူ့အမေကိုဘယ်လိုကူညီမလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Endravathu oru naalဇာတ္ကားမွာေတာ့ Thangamuthuဟာ ႏြားေမြးျမဴေရးနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္သူျဖစ္ၿပီး ႏြားေတြကို သံေယာဇဥ္ႀကီးမားသူလဲျဖစ္ပါတယ္။သူနဲ႔သူ႔ဇနီး Rasathiဟာ လက္ထပ္ထားတာ ေလးႏွစ္ရွိေနေပမဲ့ ကေလးမရေသးဘူးျဖစ္ေနတယ္။Thangamuthuကကေလးအတြက္ မစိုးရိမ္ဖို႔ Rasathiကိုေဖ်ာင္းဖ်ခဲ့ေပမဲ့ Rasathiကေတာ့ ဘုရားေက်ာင္းမွာသြားဆုေတာင္းဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့တယ္။ ဘုရားေက်ာင္းမွာ ဆုေတာင္းၿပီးေနာက္မွာဘဲ Rasathiနဲ႔အတူ သူတို႔အိမ္က ႏြားမLashkmiကပါကိုယ္၀န္ရခဲ့ၾကတယ္။ Thangamuthuကေတာ့ သူတို႔သားေလးေမြးဖြားတဲ့ေန႔မွာဘဲ မေတာ္မဆျဖစ္ကာ ေသဆုံးသြားခဲ့ရတယ္။ Rasathiဟာ တစ္ကိုယ္တည္းမုဆိုးမအျဖစ္နဲ႔ ...
IMDB: 6.5/10 4178 votes